Xafladdii Saxiixa heshiiska doorashooyinka oo billaabatay | KEYDMEDIA ONLINE
Xafladdii Saxiixa heshiiska doorashooyinka oo billaabatay
Waxaa billaawday xafladda saxiixa heshiiska doorashooyinka, kadib dhowr saacadood oo dib u dhac ah oo ku yimid, xilligii loo qorsheeyay.
MUQDISHO, Sooomaaliya - Waxaa dhawaan furmay xafladda lagu soo gabagabeynayo shir Madaxeedkii Wadatashiga ee soo billowday 22-kii bishaan May, kaas oo looga arrin sanayay xal u helidda arrimaha doorashoyinka ee muranku hareeyay Sideeddii bilood ee la soo dhaafay.
Inkastoo billaabashada xafladdu dib uga dhacday xilligii loo qorsheeyay, qanaaco la’aan ka timid siyaasiyiinta Soomaaliland garabka uu hoggaamiyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, hadana ugu danbeyn waa lagu guuleysatay billaabashada xafladda saxaiixa gabagabada.
Dhamaan Saamileyda Siyaasadda, Urur-rada Bulshada iyo Wakiillada Beesha Caalamka ayaa ku sugan hoolka xafladda, waxaana daah furay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, oo looga mahad celinayo is fahanka iyo xasilloonida siyaasadeed ee uu abuuray.
“Maanta waa maalin weyn oo baal dahab ah ka gali doonta geeddi socodka Dowladnimada Soomaaliyeed, Kadib dhowr maalin oo ay socdeen wadahadallo, waxaan ugu danbeyn ku guuleysannay in xal laga gaaro arrimihii madmadowgu ku jiray ee doorashooyinka dalka” Ayuu yiri RW Rooble.
Madaxweynayaashii hore ee dalka, Madaxda Maamul Goboleedyada, Guddoomiyayaasha Baarlamaanka labada Aqal, Wakiillada Beesha Caalamka, Urur-rada bulshada Rayidka iyo xubno kale oo muhiim ah ayaa la filayaa in ay hadal jeediyaan.
Guud ahaan wararka la xariira xafladda gunaanudka heshiiska doorashooyinka kala soco bogga wararka Keydmedoa Online.